မိန်းမတို့အဘို့ 2018 အတွက် PC မှာလူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်း: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ် - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
မိန်းကလေးများအကြားရေပန်းစားဖြစ်ကြောင်းဆယ်ပါးကို PC ဂိမ်း
အင်အားပေါ်တွင်ယောက်ျားတွေကွန်ပျူတာကမ္ဘာအောင်နိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖြည့်ဖို့မသာ! အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်လည်းကစားရန်ကိုချစ်, သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏နှစ်ပေါင်း၏, နက်ရှိုင်းသောလေထုနှင့်လှပသောဒီဇိုင်းများအပေါ်ကျရောက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအများဆုံးဦးစားပေးခဲ့ကြသည်များအတွက်ကို PC ပေါ်တွင်လူကြိုက်များဂိမ်း 2018 ခုနှစ်ဘာတွေလဲ? ကျနော်တို့ strimingovye Portal နှင့်စာရင်းအင်းများလူကြိုက်များဂိမ်းကစားန်ဆောင်မှု rustled ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဝေမျှဖို့ကိုပြင်ဆင်ခံရ!
အဆိုပါ Tomb Raider ၏မြင့်တက်
မိန်းကလေးများဟာအလွအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကိုကမ်းလှမ်းရာလူငယ်တစ်ဦးအဘိဥာဏ်ကျောင်းသူလေးမက်စ်၏သမိုင်းကိုကွောကျရှံ့။ အဓိကဇာတ်ကောင်ပင်ဒီကျွမ်းကျင်မှုများအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုသိမထားဘူး, ဒါကြောင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏ဘဝ, သို့မဟုတ်မိသားစုပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်ချွေတာခြင်းကိုဖြစ်စေ, အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များအပေါ်စွမ်းအင်သုံးစွဲကြိုးစားပါတယ်။ တစ်ဦး captivates ကြီးဂိမ်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းနှင့်မူရင်းဂိမ်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်း၏လေထုနှင့်လှပသောတေးသံနှင့်အတူပင်ကျမ်းပိုဒ်ပြီးနောက်စွန့်ခွာဖို့မလိုချင် - ဘဝကထူးဆန်းသည်။
မက်စ် - Chloe ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ကယ်ဖို့အားလုံးစွန်သူတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာနဲ့ချိုမြိန်မိန်းကလေး
ကွဲပြားခြားနားသော vohrastov ၏မိန်းကလေးငယ်များများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကို PC ဂိမ်းတစ်ခုမှာ။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်မိန်းကလေးများကဲ့သို့လူကြိုက်များဘဝ Simulator ကို၏စတုတ္ထအစိတ်အပိုင်း။ developer များအတွင်းပိုင်းဖန်တီးခြင်းနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်း, အဝတ်အစားရွေးချယ်မှု၏အမှု၌ကစားသမားများ၏မျက်နှာစာအသှငျအပွငျ၏စိတ်ကြိုက်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအတွက်မယုံနိုင်စရာနယ်ပယ်ဖွင့်လှစ်။ ဒီဂိမ်းကအတွက်အစစ်အမှန်ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့, သင်သည်မည်သည့်အလုပ်အကိုင်ရှေးခယျြနိုငျသောကွောငျ့, များစွာသောအခွင့်အလမ်းများကိုအံ့သြသွားနိုင်ဝါသနာ, မေတ္တာ၌သူငယ်ချင်းများနှင့်ပြိုလဲစေပါ။
The Sims အစစ်အမှန်ဘဝဆင်တူဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ: အချိန်ပိုမိုမြန်ဆန်ကဒီမှာပျံများနှင့်ယခင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတောင်မှသန့်စင်စေခြင်းငှါ
တစ်ခုခုကိုတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူကစားနိုင်အံ့သြစရာပဟေဠိဂိမ်း။ သငျသညျအာကာသ, အချိန်, ရူပဗေဒနှင့်အခြားဂိမ်းဒြပ်စင်နှင့်ဆက်နွယ်အများအပြားပဟေဠိဖြေရှင်းပေးရန်ရှိသည်။ ပူးတွဲကျမ်းပိုဒ်စဉ်အတွင်းသင်အမူအရာအဆင့်ပေါ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တွင်ကျယ်စွာနေရာနှင့်တည်နေရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထောက်ပြရန်နောက်ထပ်ကစားသမားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့, စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြနိုင်မယ့်ရယ်စရာစက်ရုပ်ကိုထိန်းချုပ်ယူပါ။ ယင်းဆိုးတပါးစက်ရုပ်ရေဖို့ကြမ္မာငင်ပေါ်တယ်၏ခြေအောက်၌အတွက်ပိုကောင်းတဲ့သူ့မိတ်ဆွေသင်ယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းများနှင့် pin သူ့ကိုပေါ်ပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းမှာကောင်းသော - Co-op အတွက်ရှုပ်ထွေးပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်။
အသိဉာဏ်စနစ်ကသင့်ရဲ့နေ့စဉ် action ကိုစောင့်ကြည့်။ မစ်ရှင်ရဲ့အဆုံးမှာသူက bungles သူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, သူပဟေဠိဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစား
Lara Croft နဲ့တူကွန်ပျူတာဂိမ်းအရှိဆုံးမှတ်မိဇာတ်ကောင်တစ်ခုမှာယောက်ျားမသာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးရဲရင့်စွန့်စား၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူပြီးမိန်းကလေးများမကြာခဏဒီအားကောင်းတဲ့နှင့်လွတ်လပ်သောအမျိုးသမီးနှင့်ကိုယ်ကိုပေါင်းသင်း။ , အခက်အခဲတွေအများကြီးရွှေ့ဖို့အဓိကဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဖြစ်စိန်ခေါ်မှုပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကို၌ရန်သူအနိုင်ယူနှင့်နောက်ဆုံးတော့ကတိထားရာဘဏ္ဍာကို Vault ရဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလှပခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုပြုရပါမည်။
Lara Croft မိန်းကလေးတွေအများကြီးကဲ့သို့ဖြစ်လိုသည့်ယုံကြည်မှုမိန်းကလေးနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စွန့်စား, ပေါ်လာသော
အတိအကျမိန်းကလေးများကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖြစ်သောကို PC ပေါ်တွင်နောက်ထပ်ဂိမ်း။ သငျသညျတည်ဆောက်၏ချစ်မြတ်နိုးတဲ့, ဂိမ်းမြို့ကြီးများဖြစ်ကြပါလျှင်: Skyline - ဤသင်အမှန်တကယ်လိုအပ်အရာဖြစ်တယ်။ မြို့ပြခြင်း simulation အိပ်မက်မြို့ကိုတည်ဆောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်! အဆိုပါကစားသမားစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဒေသများ, လမ်းများ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကို၏အချိန်ဇယား၏ရွေးချယ်မှု၌ကြီးသောအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သောနှင့်သာယာဝပြောရေးမြို့လိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဓားမနောက်ရွာသို့လှည့်? အရာအားလုံးမော်နီတာရဲ့နောက်ကွယ်မှာသူသည်များ၏ဆန္ဒနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်!
သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏မြို့တည်ဆောက်ရန်ဒါခက်ခဲပေမယ့်ဝေးဂိမ်းထံမှမဟုတ်ပါဘူး - ဒါဟာအဆုတ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး
trilogy ပာသမဝါယမစွန့်စားမှုအဆိုပါ Trine အလွန်ပထမဦးဆုံးမိနစ်ကနေမှော်လေထုဗဒေ။ အဆိုပါဂိမ်းကျမ်းပိုဒ်ပုံပြင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး, သူတို့ကိုသုံးခုအကြံပြုဒါကြောင့်အန္တရာယ်များနှင့်နက်နဲသောအရာတို့ကိုအပြည့်အဝကဤအံ့သြဖွယ်ကမ်ဘာပျေါတှငျသူငယ်ချင်းငါ့ကိုပဌနာရန်သေချာစေပါ! ဇာတ်ကောင်များ၏အရေးပါသောဇာတ်ကောင်တစ်ဦးချင်းစီထူးခြားသော features တွေရှိပါတယ်: ပုန္တိပိ - ပုံမှန်စစ်သည်တော်အားသတ္တိ, Zoe ကို - deftly တစ်ချိတ်-ကြောင်ကို၎င်း, ကို Amadeus နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲဓားပြ, - ပညာရှိတို့ကို Magician, telekinesis များ၏စွမ်းရည်ရှိခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးအရာဝတ္ထုကိုဖန်ဆင်း၏။ မည်သည့်ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်စွန့်စားမှုဆီသို့ဦးတည်သွားပါ!
သတိပေးခြင်း! Stardew ချိုင့်သင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်များအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါ! ဤဂိမ်းတွင်အန္တရာယ်ကင်းနဲ့ရိုးရိုးနည်းနည်းလယ်ယာတူပေမယ့်တကယ်တော့, လူမှုရေးဆက်ဆံရေးသည်နက်ခြင်း simulation ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကဇာတ်ကောင်ကိုသူ Stardew ချိုင့်အနီးရှိလယ်ယာ bequeathed ရာရှိသူ၏အဘိုးထံမှစာတစ်စောင်, လက်ခံ၏။ အဆိုပါကစားသမားအတွက်အဖိုးရဲ့အိမ်ခြံမြေသွားနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များရှိသည်အားလုံးအဘယ်သူကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒေသခံတွေနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းသည်သူ၏အပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ အမှု၌သင်တို့ကို, ငါးဖမ်းကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးနွားမြှင့်ရန်ရှိသည် - ဆိုလယ်သမားတစ်ပုံမှန်လူတန်းစားပေမယ့်ဂိမ်းကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
မကြာမီတွင်ဂိမ်းရဲ့ start ပြီးနောက်သင်သာဥယျာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးပြောင်းဖူး၏အဆင့်ကိုစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ ပိုပြီးဘာမျှ
ဒဏ္ဍာရီရှာပုံတော် Syberia ၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - ကစဉ်းစားရန်ဂိမ်းကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်ကောင်တွေ့ဆုံရန်, အချို့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအဘို့ကြီးစွာသောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည်ကြီးမားသော၏ search အတွက်မြောက်ပိုင်းမြေများမှသှားသောကိတ် Walker က၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူဖို့အတွက်ကစားသမားပေးထားပါတယ်။ ငါစိန်ခေါ်မှုပဟေဠိ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်သြဇာဇာတ်ကောင်များနှင့်လျှောက်ထားရန်တစ်နေရာရာမှာသူဖြစ်ရမည်ထားတဲ့ဂိမ်းပစ္စည်းများ, အမျိုးမျိုးမျှော်လင့်နေပါတယ်။
timeless လက်ရာနေဆဲစွန့်စားမှုရှာပုံတော်၏အမျိုးအစားနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းတဲ့, များစွာသောကစားသမားများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်
လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းသေနတ်သမားအတူတကွယောက်ျားရဲ့မသာအီလက်ထရောနစ်အားကစားပရိသတ်ကိုဆောင် ခဲ့. , ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြား geymersh ကြောင့်ပြဿနာ headshots နှင့်ပုံမှန်အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းဂိမ်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ zahilivayut အသင်းဖော်ဆွဲထုတ်။ ပြီးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များနှင့်အချို့သောအဆိုတော်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူပြည့်စုံပြိုင်ပွဲလျှက်အီလက်ထရောနစ်အားကစား Overwatch ၏စည်းကမ်းအတွက်အကြိုက်ဆုံး protagonistkah ထက်သာလွန်ဂိမ်းကိုပြ။
ပိုများသောမိန်းကလေးများ Overwatch အတွက်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ လျှော့တွက်မဖြစ်သင့်
သင်အမြဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လယ်ယာကိုရှာဖွေလိုချင်တော့လျှင်, ရေညှိ Rancher ဒီကျိန်းသေသင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး, သခွားသီး, အာလူးများနှင့်သဘာဝမျိုးစိတ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကပေါရာချိုမြိန် Slyme, ဂျယ်လီ cuties တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာရှိစိုက်ပျိုးကြပြီမဟုတ်။ အဆိုပါကစားသမားမမျှော်လင့်ဘဲ symbioses ရရှိရန်သူတို့ကိုဖြတ်ကူးခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်ပေါင်းစပ် Slyme သဘောကောင်းနှင့်ပျော့ပျောင်း-body ကျောင်းသားကနေထားကြပါတယ်: ကပြိုသည်သင်၏လယ်ယာ၏အခြားသူမြို့သား regale မှပျော်ရွှင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ပွင့်လင်းသင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်မည်သူကိုအမှန်တကယ်အသားစား Slyme လိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။
မိန်းကလေးများကွန်ပျူတာဂိမ်းကိုချစ်ယောက်ျားလေးများထက်လျော့နည်းမရှိ, လူသားထု၏ဒဏ်ငွေတစ်ဝက်၏ရွေးချယ်မှုရေး Simulator, အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းဂိမ်း, Quest များနှင့်စွန့်စားမှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကစားနည်းများ, မှကျရောက်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: PES 2018 - PES 18 Download PC Full Version Game - Link Torrent (အောက်တိုဘာလ 2019).